အိုင်ပီလိပ်စာ 192.168.8.1 ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ယက်အတွင်းစာပေးစာယူဘို့အသုံးပြုသည်။ Network tools များကိုအကြမ်းရန် login လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်သောအခါတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ 192.168.8.1 ကိုရယူရန် IP ကိုသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာ၏လိပ်စာဘားတွင်ထည့်ပါ၊ သို့မဟုတ်အောက်ရှိလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။
192.168.8.1 ဝင်မည် Admin
၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မတူညီသောကွန်ယက်များတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိသောကွန်ပျူတာများသည် internet TCP သို့မဟုတ် IP protocol တိုင်းနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။
192.168.8.1 များအတွက် logins
သင်၏ router သို့ log in လုပ်ရန် IP address သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပထမအဆင့်မှာအချို့သောဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများကို ဝင်ရောက်၍ ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည် https://192.168.8.1 browser URL URL box မှ link ကိုယခု 'ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ။ဝင်ရောက် သော့ချက်။
ID များကို login လုပ်ရန်တိုက်တွန်းသည့်ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက် router interface သို့ ၀ င်ရောက်ရန် default login diploma များကိုအသုံးပြုမည်။
login method သည်များပြားလာပြီးတဲ့နောက် router ၏ပင်မစာမျက်နှာသို့ခေါ်ဆောင်ခံရလိမ့်မည်။ အက်မင်ဘောင်တွင်၊ သင်၏ကွန်ယက်နှင့်လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်ကိုက်ညီရန်ချိန်ညှိချက်များကိုသင်ပြုပြင်နိုင်သည်။
သင်၏ router IP လိပ်စာကိုပညာတတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ် ဦး မှလုပ်ဆောင်ပါကအမြဲတမ်းအားမပေးပါ။
မေ့နေတဲ့ IP Username နဲ့ Password လိပ်စာ?
အကယ်၍ 192.168.8.1 Username နှင့် Password ကိုသင်မေ့သွားတယ်ဆိုရင် Router အတွက် Manual / Box ကိုရှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ router စာရင်း၏ပုံမှန်သုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် default username / password ကိုပြောင်းလဲပြီးမေ့သွားလျှင် access ကို restore လုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ router ကို default configuration သို့ reset လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည် default settings အားလုံးကိုပြန်ပို့ပေးလိမ့်မည်။ သင့် router ကိုပြန်လည်စတင်ရန်
အပ်သို့မဟုတ်စက္ကူကလစ်ကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုယူပြီးသင့် router ၏နောက်ကျောရှိ reset ခလုတ်ကိုရှာပါ။
လျှို့ဝှက်ခလုတ်တစ်ခုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ pointy object နှင့် ၁၀-၁၅ စက္ကန့်ခန့်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ။
၎င်းသည်သင်ပြောင်းလဲခဲ့သောအသုံးပြုသူအမည် / စကားဝှက်အပါအ ၀ င်မူလပြောင်းလဲမှုများအားလုံးကိုပြန်လည်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏မူလ login အထောက်အထားများကို အသုံးပြု၍ လော့အင်ဝင်နိုင်သည်။
အချို့သောအဆင့်များတွင်သင်၏ router နှင့်ပြproblemsနာအမျိုးမျိုးကြုံရတတ်သည်။ သင် login မျက်နှာပြင်ကိုကျော်။ မရွေ့နိုင်ပါကအချို့သောအရာများကိုမှတ်ထားရပါမည်။ အင်တာနက်တည်ငြိမ်နေပြီးအတက်အကျမရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ default gateway ကိုဆုံးဖြတ်ရန် Command prompt ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ user interface ကိုသုံးရန်သင်သုံးသော IP မှားယွင်းမှု။ နောက်ထပ်အကူအညီအတွက်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုလည်းသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
''192.168.8.1'လျှို့ဝှက်အိုင်ပီလိပ်စာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်သည်လူသိများသော IP address ဥပမာ '192.168.0.1' & '198.168.0.1' ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျန်ရှိနေသေးသော ၂ ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်ခုတည်းသောကွဲပြားခြားနားမှုမှာ '2' သည် router ကုမ္ပဏီအများစု။ MediaLink, Huawei ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်ဤကွန်ရက်ပရိုတိုကောလိပ်စာကိုအသုံးပြုသည်။
routers အားလုံးမှာမတူကွဲပြားတဲ့အိုင်ပီလိပ်စာ ၂ မျိုးပါ ၀ င်တယ်ဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်ထားရမယ်။ LAN အိုင်ပီလိပ်စာကိုကွန်ယက်မှရရှိသောအိုင်ပီလိပ်စာတစ်ခုနှင့်ကျန်အပိုင်းကို WAN IP address ဟုခေါ်သော modem မှခွဲဝေချထားသည်။ IP လိပ်စာ '2' ကိုများသောအားဖြင့် router ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိုင်ပီလိပ်စာကိုကွန်ယက်ကိရိယာဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။
ပထမ ဦး စွာ router ၏ IP address ကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။
ပထမအချက်အနေနဲ့ router ကို PC နဲ့အခြား tool တစ်ခုခုနဲ့မှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်ပါ။ သင်သိရန်လိုအပ်သည်မှာ router admin panel ကိုဖွင့်ရန်သင့်အားသင့်တော်သော router နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ဤအတွက်မည်သည့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမျှမလိုအပ်ပါ။
ထို့ကြောင့်သင့် router ၏ IP address နှင့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ Laptop ပေါ်ရှိ command prompt သို့သွားခြင်းဖြင့်သင်၏ router ၏ IP address ကိုသိနိုင်ပါတယ်။
router ၏ IP address ကို web-interface အသုံးပြု၍ အခြား setup CD တစ်ခုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်နည်းလမ်း ၂ ခုဖြင့်အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူတော်တော်များများသည် 2.l လိပ်စာနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းလိပ်စာများနှင့်ပanyိပက္ခမရှိကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးအိုင်ပီလိပ်စာကိုမေ့သွားပါကသူသို့မဟုတ်သူမသည် router ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်အရာအားလုံးကိုမူလအတိုင်းပြန်ထားလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်မည်သူမဆို Google ရှာဖွေရေးနေရာမှ“ ကျွန်ုပ်၏ IP” ကိုရှာရုံမျှဖြင့်သူ / သူမ၏မျှဝေထားသော IP address ကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ အတိအကျပြောရရင်၊ အဲဒါဟာသင့်ရဲ့ shared IP address ကိုပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။
ယခုအချိန်တွင်သင်၏ပုံမှန်ဘရောင်ဇာသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခြား browser သို့သွားပြီးနောက် IP address address bar ကိုရိုက်ထည့်ပါ https://192.168.8.1 browser ၏ address ကို space ကိုသို့။ ၎င်းသည်သင့်အား site တစ်ခုသို့လမ်းညွှန်ပေးပြီး router admin panel သို့ login ဝင်ရန်သင့်အား ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်သင်၏ router ၏ username နှင့်စကားဝှက်ကိုရေးရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏ proxy၊ Safety options, network management, WLAN settings, router software နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာမြောက်များစွာကိုပြုပြင်ရန် router admin panel ထဲသို့ဝင်ရန်လိုအပ်သည်။
Username & Password Router ကိုမမှတ်မိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
လူအများအပြားသည်သူတို့၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုပြန်မမှတ်မိတော့ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသူများအတွက်ရှင်းပြချက်တစ်ခုရှိသည် router ရဲ့ username & password ကို.
အသုံးပြုသူအမည်များနှင့် passke များကိုသင်မမှတ်မိသည့်ကိစ္စရှိနိုင်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သင်သည် router ၏အမှတ်အသားနှင့် login လိပ်စာတို့နှင့်အတူ၎င်းကိုရှာဖွေသည်။
နောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုမှာသင်၏ passkey ကိုမှတ်မိရန်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင် router ၏လျှို့ဝှက် reset ခလုတ်နှင့်အတူ router ကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။
အခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာသင်ရှာဖွေနိုင်သည့်အတွက်သင်၏ router ရဲ့ login အထောက်အထားများကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည် router ရဲ့ပုံမှန် login ကွန်ယက်ပေါ်ရှိ ID များ။
ယခုသင်သည် router ၏ login အသေးစိတ်ကိုသတိပြုမိပါကသင်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိသင်၏ router ၏ ID ကိုရေးပြီးသင် router admin panel သို့ရောက်လိမ့်မည်။
Web-setup homepage ဖြင့် router ကိုပင်ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အဆုံး၌, သင်နှင့်ပတ်သက်။ အချက်များစွာသတ်မှတ်ထားသောပါပြီ 192.168.8.1 အင်တာနက်ပရိုတိုကောလိပ်စာ။ ဤအပိုင်း၌ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် router များ၊ ကြိုးမဲ့ modem များ၊ IP လိပ်စာများနှင့်အခြားအချက်အလက်များစွာရှိသည်။ ဤ IP လိပ်စာသည်ပြatနာများစွာကိုမဖြေရှင်းဘဲအိမ်တွင်းရှိ Broadband ကွန်ယက်ကိုပြုပြင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်အားလုံးသည်သင်၏ router ၏ network သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်၊ ၎င်းသည် IP address ပေါ်တွင်သင်၏အချက်အလက်များကိုသေချာပေါက်တိုးပွားစေခဲ့သည်။